umatshini wokupakisha irayisi ozenzekelayo, irayisi enobunzima kunye nomatshini wokupakisha
1. Onke amalungu onxibelelwano enziwe ngawo 304 i-stainless steelfood grade kwiPacker, umhlwa ukumelana, ubomi obude.
2. Ukufakwa ngokulula kwabaqalayo, akukho mfuneko yobunjineli abanezakhono.
3.Umatshini wokupakisha ozenzekelayo, bamba kuphela umlomo ovulekileyo wengxowa.
4. Ukutshatisa isivamvo sokuchaneka okuphezulu kunye nemitha ephezulu yokuqonda.
5.Ilayisi enobunzima kunye nomatshini wokupakisha ngesoftware yokuzilungelelanisa, ukulungisa ngokuzenzekelayo, ngaphezulu kwealam, Ukuhlola ingxaki ngokuzenzekelayo kunye neminye imisebenzi.
Iinkcukacha Product Machine oluzenzekelayo irayisi ukupakisha
Lo matshini wokulayisha irayisi uzenzekelayo usetyenziselwa ukupakisha okuziinkozo okuziinkozo,imbewu,granular, imitya, ibhlokhi,kunye nezixhobo zegranular-powder,Umatshini yerhasi onobunzima kunye nomatshini wokupakisha unokupakisha izixhobo ezahlukeneyo, njengerayisi,ingqolowa ,umbona,Amayeza amaTshayina granular, ikhephu-imbewu, ityiwa, ukutya,isichumisi sezinto eziphilayo, izichumisi eziyinkimbinkimbi, urea,isichumisi nitrogen, isichumisi se-phosphate, isichumiso se potassium, yondla,ukuhlamba i-powderand hardware njl .umatshini wokupakisha unokukhetha ukhetho ngokugqibeleleyo isityalo selayisi izixhobo.
Iimpawu ezizenzekelayo zomatshini wokupakisha irayisi
1. Umatshini wokupakisha irayisi wokupakisha kunye nesantya esinefayile: khawuleza, phakathi kwaye kancinci.
2.Umatshini wokupakisha ilayisi utshatisa inzwa echanekileyo yokulinganisa kunye nemitha ephezulu yokuqonda.Wenza umsebenzi we sensor ochanekileyo, ukunceda ukunciphisa iimpazamo zenzwa, umatshini wokupakisha ozenzekelayo uphucula ukuchaneka komgangatho kunye nenkqubo yolawulo.
3.Ukuzibizela ngokwakho kunye nokujonga okwenziwa ngesandla, i-microprocessor ngexesha lomsebenzi wabo basebenzise ukulungiswa komgangatho ngokuzenzekelayo ukuze boyise ukusetyenziswa kwexesha elide kunye notshintsho lobushushu bendalo olubangelwa yimpazamo..
4.Umatshini wokupakisha irayisi othomathikhi kunye nenani elisebenzayo lezinto zokubala kunye nenani.
5.Ilayisi enesisindo kunye nomatshini wokupakisha uhambelana nesoftware yakho, ulungisa ukuwa ngokuzenzekelayo, gubungela eyoyikisayo kwaye ukhangela ingxaki ngokuzenzekelayo.
6. Umatshini wokupakisha irayisi ozenzekelayo wamkela ungeniso lwe-pneumatic activator ethembekileyo, ezingangcolisiyo kwaye kulula ukuba zigcinwe.
7.Ukuphakama kweqonga lokuhambisa kunye nokuhambisa isantya okulungelelanisiweyo kulo matshini wokufaka irayisi ngokuzenzekelayo. Iplatform ubudeh 2.2m okanye ngokuzithandela 2.7m.
8.Icandelo lichukumisa izinto zisebenzisa insimbi engagcinwanga ekhuselekileyo, zicocekile kwaye akukho lula ukuba zonakaliswe kwaye ubomi belayisi obunzima kunye nokupakisha umatshini mde.
9.Inkqubo ephezulu yokubamba ibhegi, ukuxhoma ibhegi kunye nokukhupha kulawulwa ngumda wenkqubo.
10.Ngonxibelelwano olupheleleyo lwenethiwekhi,umshini wokupakisha irayisi ozenzekelayo unekhompyuter ekhawulezayo nesantya esiphezulu sokutshintshiselana ngedatha.Umsebenzi nomsebenzi wonxibelelwano wedatha.
Iparameters zobugcisa zerayisi enobunzima kunye nomatshini wokupakisha
Amandla aphambili:0.55kw,amandla okuthunga:0.37kw,
± 0.2% -0.5%
5-50kg / ibhegi
Ingxowa elukiweyo,ibhegi yelaphu,ibhegi yeplastikhi,ibhegi yengxowa,njl
Inxalenye yoqhagamshelo nezinto zokupakisha zenziwe 304 yenziwe ngentsimbi eshayinayo
Ukupakisha uluhlu lwezixhobo
Umgubo,imbewu,isichumisi,ukutya,izixhobo zemichiza,umgubo njl
Ukuthunga ngokuzenzekelayo kunye nokuhambisa
Ividiyo yomatshini wokupakisha iilayisi
Qhagamshelana nathi Kuba oluzenzekelayo umatshini ukupakisha irayisi